Home Wararka Rooble iyo Safiirka Mareykanka oo kulan gaar ah yeeshay
Rooble iyo Safiirka Mareykanka oo kulan gaar ah yeeshay
Ra’iisul Wasaararaha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa la kulmay Safiirka cusub ee Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Larry Andr.
Safiirka iyo Rooble aya a wada hadlay xiriirka labada dal, arrimaha doorashooyinka iyo Amniga.
Kulankan ayaa ku soo aaday maalmo kaddib markii Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka uu ku dhawaaqay dhaqan gelinta xayiraado ka dhan ah shaqsiyaadka lagu eedeeyay inay wax u dhimayaan dimoqraadiyadda, caga jugleynta ka dhanka ah Suxufiyiinta.
Previous articleQoorqoor oo kursigii Aqalka Sare u xiray Wasiirkiisa Maaliyadda
Next articleDigniin laga soo saaray nabadoon la sheegay inuu u xareysan yahay Fahad Yaasiin
Gudoomiyaha golaha Shacabka oo la kulmay Wakiilka Xog-hayaha Guud ee QM
Maamulka G/Banaadir iyo Iskaashatada gaadiidleeda oo soo saaray goaan mid ah.
Booliska AMISOM oo loo magacaabay Taliye cusub